Momba anay | Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd.
Retardants amin'ny lelafo phosphate
Ny foto-kevitsika: Kalitao Voalohany, vidiny tsara kokoa, Serivisy matihanina
Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd, dia natsangana tamin'ny taona 2013, miorina ao an-tanànan'i Zhangjiagang, dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana sy fivarotana ny solika phosphore retardant sy plastika, PU elastomer ary Ethyl Silicate. Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny PVC, Pu foam, spray polyurea tantera-drano, fitaovana mitoka-monina mafana, adhesive, coatings ary rubbers sns. Nanangana zavamaniry OEM efatra izahay tany Liaoning, Jiangsu, Tianjin, Hebei & Guangdong faritany. Ny fisehoan'ny orinasa sy ny tsipika famokarana tena tsara dia mahatonga antsika hifanaraka amin'ny tinady ampifanarahana amin'ny mpanjifa. Ny orinasa rehetra dia manaraka tanteraka ny lalàna mifehy ny tontolo iainana, fiarovana ary ny asa izay miantoka ny famatsiana maharitra. Izahay dia efa nahavita ny fisoratana anarana Eoropeana, Korea K-REACH fisoratana anarana feno ary Torkia KKDIK mialoha fisoratana anarana ho an'ny vokatra lehibe.
Ny fahaizantsika famokarana isan-taona dia mihoatra ny 20,000tons. 70% ny fahafahantsika dia manondrana manerantany an'i Azia, Eropa, Amerika Avaratra, Afovoany Atsinanana, S. America sns. Ny sandan'ny fanondranana isan-taona dia mihoatra ny 16 tapitrisa dolara. Miankina amin'ny fanavaozana sy ny serivisy ho an'ny matihanina, manome toky izahay fa hanolotra vokatra mahay sy mifaninana amin'ny mpanjifanay rehetra.
Manana ekipa sy teknisiana fitantanana matihanina manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny sehatry ny akora simika tsara izahay mba hanomezana tolotra teknika tsara kokoa. Ny orinasantsika manokana dia manome anay vahaolana tsara kokoa amin'ny serivisy lojika sy hitahiry vola ho an'ny mpanjifa.
Zhangjiagang Fortune Chemical Co., Ltd dia manana ekipa teknika matanjaka amin'ny indostria, traikefa matihanina am-polony taona maro, haavo famolavolana tena tsara, mamorona fitaovana marani-tsaina avo lenta. Mampiasa rafitra famolavolana mandroso sy fampiasana ny fitantanana kalitao iraisam-pirenena mandroso ISO9001 izahay. fitantanana ny rafitra. Ny orinasanay dia misahana manokana amin'ny famokarana fitaovana avo lenta, hery ara-teknika matanjaka, fahaiza-manao fampandrosoana matanjaka, serivisy ara-teknika tsara. Miorina amin'ny kalitaon'ny vokatra izahay ary mifehy tsara ny fizotran'ny famokarana, manolo-tena amin'ny fanamboarana karazana rehetra. Na mialoha izany -fivarotana na aorian'ny varotra, hanome anao serivisy tsara indrindra izahay hampahafantatra anao sy hampiasa ny vokatray haingana kokoa.
Fampidirana fohy momba ny vokatra
Agence de-airing / leveling amin'ny poloney, ny hoditra ary ny rindrina amin'ny rindrina
Defoamer amin'ny fitrandrahana beton sy solika
Elastomer ao PU; mpitsabo mpanasitrana ao amin'ny Polyurea & epoxy resinU
Elastomer ao PU; mpitsabo mpanasitrana ao amin'ny resin Polyurea sy epoxy
Fandakanana ny lelafo ao amin'ny foam foam sy thermoplastics Pu
Fandakanana ny lelafo amin'ny thermosets, sombin-tsakafo PET & PU
Ny fihenan'ny lelafo amin'ny resina phenolika sy ny polyvinyl chloride
Mpanakana loko ho an'ny kofehy sy polymer hafa; Mpitrandraka fanafody famonoana bibikely sy fanafody famonoana bibikely
Mpiasa anti-akanjo amin'ny lacquer nitrocellulose sy menaka fanosotra
Faharetan'ny lelafo amin'ny fingotra sentetika, PVC ary tariby
Miorina amin'ny afo ny resin PVC, ny epoxy resin, ny phenolic resin ary ny PU
Ny fihenan'ny lelafo amin'ny nitrul / acetate ary résin vinyl
Fatorana amin'ny sary hosodoko fanoherana ny lozisialy an-dranomasina sy fanariana marina